Mourinho iyo Klopp ayaa dood adagi dhex martay kadib markii Liverpool ay ka badisay Spurs… – Hagaag.com
Mourinho iyo Klopp ayaa dood adagi dhex martay kadib markii Liverpool ay ka badisay Spurs…
Posted on 17 Diseembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Sida caadada u ahayd, tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa si weyn u soo jiitay warbaahinta kadib markii kooxdiisa Liverpool uga badisay 1-2, taas oo dood adagi ka dhex abuurtay isaga iyo tababaraha reer Jarmal ee “Reds” Juergen Klopp kadib markii ay ciyaartu dhamaatay kulankii Premier League ee la ciyaaray Arbacadii.
Mourinho ayaa weeraray habdhaqanka ee “dhaqdhaqaaqa” Klopp ee khadka ciyaarta, kadib markii gool halis ah uu dhaliyey Ferminho dhammaadka ciyaarta ee daqiiqadii 89aad, kaas oo kooxdiisa gacanta ka saaray seddax dhibcood oo qaali ah, iyagoo keli ku noqday hogaaminta horyaalka Ingriiska.
Waxaa iska cadaa in Mourinho uu xanaaqsanaa, islmarkaana qalbi jabsanaa, wuxuuna ku adkeysanayey in ay cadaalad daro tahay inay kooxaha barbaro ahaadaan, maadaama kooxdiisa dareemayey inay xaq u laheyd guul.
Mourinho ayaa shaaca ka qaaday khilaafka uu dhex maray isaga iyo Klopp, sida uu tababaraha reer Portugal yidhi, “Waxaan u sheegay in kooxdii fiicnayd laga badiyay isaguna aanu ogolayn, laakiin tani waa ra’yigayga, haddii aan u dhaqmi lahaa sida Klopp ee taabashada khadka ciyaaraha waa la i ceyrin lahaa, laakin Klopp wuxuu ku dhaqdhaqaaqayey khadka taabashada waqtiyo badan.. Aniga waan murugeysanahay.”
Dhinaca kale, Klopp ayaa wuxuu u muuqday qof ku faraxsan qaab ciyaareedka ciyaartoydiisa da’ yarta ah ee ay soo bandhigeen, wuxuuna sheegay in “kulanku uu ahaa mid aad u adag xilli adag oo xilli ciyaareedkan ah, laakiin waxaan uqalnay seddexda dhibcood, ciyaartoyda Waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed fiican waxayna yaqaanaan sida loo xakameeyo ciyaarta. ”
Markii Klopp la weydiiyay hadalada Mourinho uu ku yiri, ma uusan la galin wax muran ah oo wuxuu ka cararay jawaabta si toos ah isagoo leh, “Malaha Ingiriisigeyga – sida muuqata – waa ka sii xun yahay sida aan u maleynayo. Wuxuu ii sheegay: Kooxdii fiicaneyd ayaa khasaartay, mana jirto sabab aan uga shakiyo ficilkeyga khadka taabashada, mana garanayo.” waxa uu ka hadlayo “.
Tirakoobyadu waxay muujinayaan in boqolkiiba heysashaha kubbada ay ahayd 76% Liverpool halka 24% ay laheyd Spurs, Liverpool-na waxay ku tuurtay goolka 17 kubbadood, halka Tottenham ay heshay 8 darbo oo lagu tuuray goolka, sidoo kale caruurta Klopp wuxuu dhaafay baaskooda rubucii ugu dambeeyey ee ciyaarta 200 oo baas halka wiilasha Mourinho heleen 19 baas oo keliya.